Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165666 times)
« Reply #340 on: August 07, 2012, 03:49:24 AM »
Quote from: gawlibell on May 26, 2011, 12:36:16 PM
ကျွန် တော် လည်း မေး ချင် လို့ပါ
ကြက်ဥ ကို မီး လည်း မ သုံး ရ ဘူး ။ ဆီလည်း မ သုံး ရ ဘဲ နဲ့
ကြက်ဥ ကို ဘယ် လို ကျော် မ လဲ ??
ကြက်ဥ ကိုမြေကြီးပေါ်ချပြီး ခြေထောက်ဖြင့်ကျော်ပါ.
ဟာ ဟာ့ ငါကွ
New Member လေးပါ
« Last Edit: August 07, 2012, 09:05:42 AM by tunaye2011 »
« Reply #341 on: August 07, 2012, 03:51:37 AM »
Quote from: သားကြီး on May 26, 2011, 01:18:06 PM
သစ် ပင် တစ် ပင် မှာ ငှက် အ ကောင် ၅၀ နား နေ တယ်......
ငှက် အား လုံး ကို တစ် ပြိုင် နက် ထဲး ဖမ်း ချင် တယ် ....
ဘယ် လို ဖမ်း မ လဲ...............?
« Last Edit: August 07, 2012, 09:07:37 AM by tunaye2011 »
« Reply #342 on: August 07, 2012, 04:08:16 AM »
Quote from: Riki on June 13, 2011, 10:20:47 AM
(၁) မြစ်အဖေကြီးနဲ့မြစ်အမေကြီးက မွေးတဲ့မြို့ ===>>>မြစ်သား
(၅)ဒီနေ့ည ငါစောင့်ရတဲ့အလှည့်မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့မြို့ ===>>>မင်းကင်း
(၁၃)မိန်းမမှာ ညီမတွေရှိရင် သတိထားပေရော့ဆိုတဲ့မြို့ ===>>>၀ါးခယ်မ
(၁၆) ရုံးသွားကျောင်းသွားသတိထား ဒါတွေယူကွယ့်မမေ့နဲ့တဲ့... အဲ့ဒီမြို့ (၁၇)အဲ့ဒီမြို့ရွာလိုက်တာမှသဲကြီးမဲကြီးပဲတဲ့ ===>>>
(၁၉.)ရယ်တာကို ခါးသီးတဲ့မြို့ ===>>>
(၂၁).အားအားယားယားမနေတတ်တဲ့ မြို့ ===>>>
(၂၂.)အ၀င်မှာထဲက ခိုင်ခိုင်ခံခံရှိတဲ့မြို့ ===>>>
(၂၆).ကျုံလှီသေးကွေးပီး လူစဉ်မမှီတဲ့မြို့ ===>>>
(၂၇).လက်သုတ်အ၀တ်လိုဟာမျိုးနဲ့ မြို့ ===>>>
(၂၈).တိရစ္ဆန်တွေနဲ့တောင် ဖဲရိုက်တဲ့မြို့ ===>>>
(၂၉).မိုးသိပ်မရွာတဲ့ မြို့ ===>>>မိုးနဲ
(၃၄).အကောင်ကြီးကြီးတစ်ကောင်မှာ အနာပေါက်စေတဲ့မြို့ ===>>>
(၃၆).ဂျော်ကီတွေကြိုက်တဲ့မြို့ . . . ===>>>
ဒါမျိုးတွေကျ ကိုယ်ကလဲကိုယ်ကြိုက်တာဖွက်တာ ဖြေတဲ့လူကလဲကိုယ်ထင်တာပြောနိုင်တာဘဲ ဖြေပေးကြည့်ကြပါ
« Last Edit: August 07, 2012, 09:10:22 AM by tunaye2011 »
« Reply #343 on: August 07, 2012, 08:17:47 PM »
သူ့ကြည့်တော့ အဖြူရောင် အထဲကမှောင်
« Reply #344 on: September 25, 2012, 03:19:44 PM »
ဟဲ နဲနဲတော့ဝင်ကျပ်လိုက်ဦးမယ် ...
မေးခွန်းက ဒီလို .....
သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် တီးဆိုင်သွားကြတယ်ဗျာ... သောက်စားပီးတော့ ... ရှင်းမယ် ဆိုပီး စားပွဲထိုးကောင်လေးကို ခေါ်လိုက်တယ်.. ဘယ်လောက်လဲ ပေါ့ ... ကောင်လေးက ၃၀ ကျပါတယ် အကိုတဲ့ ... အဲ့တော့ ၃ ယောက် ဆိုတော့ တယောက်ကို ၁၀ ထုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ ... ကောင်လေးက ကောင်တာကို ပိုက်ဆံသွားပေးတယ် ... ဆိုင်ရှင်က ဟဲ့ကောင် မင်းမှားနေပီ ... အဲ့ဝိုင်းက ၂၅ ကျပ်ပဲ ကျတာ သွား ပြန်သွားပေးချီဆိုပီး ၅ ကျပ် ပြန်အမ်းခိုင်းလိုက်တယ် ....
အဲ့တော့ ကောင်လေးက စဉ်းစားတယ် ... လာတာ က ၃ ယောက်ဆိုတော့ ၅ ကျပ်သွာပေးရင် ပြန်ခွဲဖို့ ခက်လိမ့်မယ် ဆိုပီး ၂ကျပ် ဘတ်ထားလိုက်တယ် ... ၃ ကျပ်ပဲ ပြန်အမ်းလိုက်တာပေါ့
အဲ့မှာ ... ပေးတုံးက တယောက်ကို ၁၀ ပေးတယ် ... ၁ ယောက်ကို ၁ ကျပ်ပြန်အမ်းတော့ ... တယောက်ကို ၉ ကျပ်ကျတယ်...
၉ x ၃ = ၂၇ ... ၀ိတ်တာ ၀ိုက်တာက ၂ ကျပ် ၂၇ + ၂ = ၂၉ ... ပေးလိုက်တုံးက ၃၀ ... ၁ ကျပ်ဘယ်ပျောက်သွားပါသလဲ ....
အဲ့မေးခွန်းကို ဖြေနိင်တဲ့လူရှိရင် ဘီယာ အ၀တိုက်ပါ့မယ်
« Reply #345 on: September 25, 2012, 03:41:08 PM »
Quote from: wish on September 25, 2012, 03:19:44 PM
မေးခွန်းကိုလှည့်မေးထားလို သာ ၁ ကျပ်ပျောက်တယ် ထင်ရတာပါ ။
ကျသင့်ငွေက ၂၅ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်..။
ပြန်အမ်းတာက ၃ ကျပ်ဆိုတော့ ၂၈ ကျပ်ဖြစ်သွားပါပြီ..။
စားပွဲဖိုးက ဘတ်ထားတဲ့ ၂ ကျပ် ထဲ့ပေါင်းရင် စုစုပေါင်း ၃၀ ပဲ ပြန်ရပါတယ်..။
နည်းနည်း ၀င်ကြပ်လို့ ..နည်းနည်း ပြန်ဖွထားပါတယ်..
« Last Edit: September 25, 2012, 04:10:34 PM by tunaye2011 »
« Reply #346 on: September 25, 2012, 03:54:42 PM »
Quote from: tunaye2011 on September 25, 2012, 03:41:08 PM
အဲ့ဒါမျိုးဖြေမယ်ဆိုရင် ကျနော့်မေးခွန်းက ပျောက်သွားပါပီ ...
ကျနော်မေးတာက ၁ ကျပ်ပျောက်တာကိုမေးတာပါ အကိုက မေးခွန်းကို ပြန်ရှင်းပြထားသလိုဖြစ်နေပါတယ် ... အဖြေ မှားပါတယ် လို့ တော့မပြောပါဘူး ... ဒါပေမယ့် ကျနော်လိုချင်တဲ့ အဖြေတော့မဟုတ်ပါဘူး
« Last Edit: September 25, 2012, 07:16:36 PM by hotsexygirl »
« Reply #347 on: September 25, 2012, 06:25:22 PM »
Quote from: wish on September 25, 2012, 03:54:42 PM
သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် သုံးလိုက်တဲ့ ၂၇ ကျပ်ထဲမှာ စားပွဲထိုးယူလိုက်တဲ့၂ ကျပ်ကပါပြီးသားပါ။
ပြန်အမ်းတဲ့၃ကျပ် ပေါင်းလိုက်ရင် ၃၀ ကျပ် ရပါတယ်။
စားပွဲထိုးယူလိုက်တဲ့ ၂ကျပ်နဲ့ မှားပေါင်းမိလို့၁ ကျပ်ကွာနေတာ။
၃ ကျပ်နဲ့ပေါင်းရမှာကို ၂ ကျပ်နဲ့ ပေါင်းမိလို့၁ကျပ်ပျောက်နေတာပါ။
ဒါဆိုကျုပ်ကို ဘီယာတိုက်လို့ ရပါပြီနော်။
« Last Edit: September 27, 2012, 06:36:26 AM by နတ်မင်းကြီး »
« Reply #348 on: October 26, 2012, 11:45:59 AM »
Quote from: ninetail on August 07, 2012, 04:08:16 AM
(၄)လူကြီးမဖြစ်သေးတဲ့မြို့ ===>>> ကလေး
(၁၂)လေဘေးထည်မြို ===>>> ဖျာပုံ
(၂၃).နောက်ဆုံးကမြို့ ===>>> ဘိတ်မြို့
(၂၆).ကျုံလှီသေးကွေးပီး လူစဉ်မမှီတဲ့မြို့ ===>>> ပုသိမ်
(၃၆).ဂျော်ကီတွေကြိုက်တဲ့မြို့ . . . ===>>> မြင်းခြံ
« Last Edit: October 26, 2012, 12:11:04 PM by tunaye2011 »
« Reply #349 on: October 26, 2012, 02:41:50 PM »
Quote from: CThu on October 26, 2012, 11:45:59 AM
သောက်လို့ မူးတာမဟုတ်ပါပုးဂျာ မူးနေလို့ သောက်မိတာပါ